भारतीय राजनीतिमा उदाएकी पुष्पम प्रिया चौधरी
२०७७ कार्तिक २ आइतबार ०५:०१:००
काठमाडौं । भारतको बिहार राज्यमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा पुष्पम प्रिया चौधरीको नाम चर्चामा छ । लन्डन स्कुल अफ इकनोमिक्समा अध्ययनरत पुष्पम ‘प्लुरल्स’ नामक पार्टी निर्माण गरेर चुनावी मैदानमा होमिएसँगै चर्चामा आएकी हुन् । उनी पटनाको बाँकीपुरबाट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता नितिन नवीनविरुद्ध चुनावी मैदानमा होमिकी छन् । पुष्पम् आप्mना उमेदवारहरुलाई ‘जाति प्रोफेशन’ बताउँदै आएकी छन् भने धार्मक सम्प्रदाय– बिहारी ।
बिहारमा अक्टोबर २८, नोभेम्बर ३ र ७ गरी तीन चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । दुई सय ४३ सिटका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि अहिले राजनीतिक दलहरु प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छन् ।
को हुन् पुष्पम प्रिया चौधरी ?
पुष्पम जनता दल (युनाइटेड) का नेता तथा विधान परिषद् सदस्य (एमएलसी) रहिसकेको दिलीप चौधरीकी छोरी हुन् । बिहारको दरभंगाकी पुष्पम बेलायतको प्रख्यात लन्डन स्कुल अफ इकनोमिक्सबाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनमा मास्टर्स गरेकी छन् । उनी प्लुरल्स पार्टीकी अध्यक्ष हुन् । प्लुरल्सको एक विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको छ । जसका माध्यमबाट पुष्पम प्रोग्रेसिभ बिहारको विषय उठान गरिरहेकी छन् ।
पुष्पमका बुवा दिलिप बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारका नजिकका साथी हुन् । तर, उनले मुख्यमन्त्रीको उमेदवार बनेर सोझै नितिशलाई चुनौती दिएकी छन् । नितिशलाई उनकै पार्टीका नेताकी छोरीले च्यालेन्ज गरिरहेकी छन् ।
पुष्पम प्रिया चौधरीको लक्ष्य के हो ?
पुष्पमले अखबारहरुमा प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा लेखाएकी छन्– बिहारलाई गति चाहियो, बिहारको पखेटा हुनुपर्छ, बिहारलाई परिवर्तन चाहियो, किनकी बिहारलाई राम्रो चाहियो र राम्रो सम्भव छ । बिना मतलबको छाडटौं, प्लुरल्स जोडिऔं जसले २०२० मा बिहार दौड्न सकोु्, उड्न सकोस् ।
पुष्पमको पार्टीको लोगोमा सेतो घोडा र घोडालाई पखेटा लगाइएको छ । ग्रीक मिथकमा यसलाई ‘पेगासस’ को नामले जानिन्छ । यो घोडा जमिनमा दौड्नुका साथै आकाशमा उड्न पनि सक्थ्यो । यसलाई शक्ति र तीव्रताको प्रतीक मानिन्छ । जुन लाइन पुष्पमले आप्mनो पार्टीका प्रयोग गरेकी छन्, जसमा गति र उड्ने कुराको जिकिर गरेको पाइन्छ ।
जातीय राजनीति अन्त्य गर्ने लक्ष्य
विगत लामो समयदेखि बिहारमा चल्दै आएको जातीय राजनीति अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथमा पुष्पम निर्वाचनमा होमिएकी छन् । बिहारमा जातीय भेदभाव तथा जातीय असमानताले जरो गाडेको छ । उनले जातीय राजनीति अन्त्यका लागि आफ्नो जातमा ‘राजनीतिज्ञ’ र धर्ममा ‘बिहारी’ लेखेकी छन् ।
पुष्पम आफूलाई कुनै पनि जाति वा धर्मसमुदायको कारण नभएर नीतिका कारण मतदान गरुन् भन्ने चाहेको बताइरहेकी छन् । जातजाति कर्मको आधारमा हुनुपर्ने भए पनि जातीय भेद्भाव भने हुन नहुने उनको भनाइ छ । यस किसिमको भेदभाव नीतिगत रुपमा विपन्न परिवारलाई आर्थिक अवसरको माध्यमबाट जातीय भेद्भाव हटाउन सकिने पुष्पमको बुझाइ छ ।
उनको राजनीतिक अभ्यासमा बिहारका डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापकलगायतका शिक्षित वर्गले साथ दिइरहेका छन् । उनीहरुले यो निर्वाचनमा नयाँ अनुहारलाई मौका दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।